RAVALOMANANA SY NY RMDM : Tsy manana fanantenana intsony amin’ny fifidianana
Mazava ny lalan’ny mpanohitra ankehitriny. 3 mai 2022
Manomboka miady an-trano sy misara-bazana izy ireo ary mifanasoketa am-pitoerana, ry zareo samy ao anatin’ny fanoherana ihany no nilaza fa tsy haharesy ny Filoha Andry Rajoelina mihitsy ingahy Ravalomanana Marc amin’ny fifidianana filoham-pirenena ho avy io.
Kely dia kely ny herijika ananan’ny Filoha teo aloha Ravalomanana Marc hiverenana eo amin’ny Fitondrana. Efa manomana fatratra ny fiatrehana ny fifidianana ry zareo amin’ny alalan’ny fitetezam-paritra maro samihafa. Ny faran’ny herinandro lasa teo iny, ohatra, dia Distrika maro no noteteziny niaraka tamin’ireo ekipany eo anivon’ny Rodoben’ny mpanohitra.
Nambara tamin’izany fa ny hamerenana ny tanjaky ny antoko Tim manerana ny Nosy no anisany tanjona voalohany imatimatesana. Ho an-dry zareo Tim etsy Atsimondrano kosa indray dia ny hiverenan’ity Filoha teo aloha ity eo amin’ny Fitondrana no imasoana, saingy mbola mijanona ho nofinofy fotsiny ihany izany hatreto raha ny tombana ara-politika. Mijanona ho nofinofy satria na ry zareo samy milaza azy ho mpanohitra aza dia misara-bazana sy mifamely am-pitoerana.
Voizin’izy ireo fatratra fa nisy tamin’ireo antoko nanohana sy niara-dia tamin’izao Fitondrana izao no nisintaka, kanefa tahaka izany ihany koa ny zava-misy eo anivon’ny fanoherana eto an-toerana ankehitriny. Na tsy nisy fanambaràna ôfisialy aza dia hita ny fisintahan’ireo mpitolona sy mpitarika ny antoko Tim mafana fo tamin’ny Filoha teo aloha Ravalomanana Marc sasantsasany. Midika izany fa misy fizarazarana eo anivon’ireo samy mpanohitra ary io fizarazarana io no vao mainka mampidina ilay hery kely ananan’ny kandidà laharana faha-25 tamin’izany.
Tsy mahatoky tena
Misy antoko politika maromaro izy ireo no mivondrona ao anatin’ny Rodoben’ny mpanohitra. Ny ankamaroan’izy ireo dia zara fa antoko politika sisa izay tsy manana akory ny tsangan-keviny mazava fa manara-drenirano fotsiny satria mety tsy nahazo seza taty amin’ny Fitondrana dia mirona be fahatany mankany amin’izay fanoherana izay. Anisany mahagaga ny maro ny fahitana indray an’ ingahy Joseph Yolland izay milaza ankehitriny fa manohana sy miara-dia indray amin’ny Filoha teo aloha Ravalomanana Marc kanefa tena nokasain’ity farany hogadraina mihitsy tamin’ny fotoana nitondrany. Izy izay marihina fa loholona voafidy tamin’ny loko Tim tamin’izany fotoana izany. Vokatr’io dia nitsoaka niala teto Madagasikara mihitsy i Joseph Yolland kanefa dia izao lasa manohana azy izao indray, sa izany tokoa ve no atao hoe politika eto Madagasikara izay tsy mahagaga ny maro intsony ? Na ahoana na ahoana hoy ny mpanara-baovao sy mpanao politika izay tafaresaka tamin’ny mpanao gazetinay dia tsy haharesy amin’ny fifidianana filoham-pirenena izany intsony ny antoko Tim.
“Betsaka izay fifidianana efa nifanandrinana teto amin’ny Firenena izay fa mbola vitsy an’isa foana ireo olon’ny Tim lany. Ankilany nalaza ratsy tamin’ny tsy fahaiza-mitantana, ny didy jadona sy ny fanaovana tantely afa-drakotra ny harem-pirenena ihany koa ingahy Ravalomanana Marc. Noho ireo rehetra ireo dia tsy manana fahatokisan-tena hoenti-miatrika fifidianana intsony ny tenany miaraka amin’ireo mpanohitra miara-dia”, hoy ny fanehoan-kevitry ny mpanara-baovao iray. Ahilika any amin’ny Ceni sy ny HCC ny rihatra, manambana mialoha fa hisy hala-bato amin’io fifidianana io kanefa atao izany mba hanakonana ny tsy fahatokisan-tena.
Any amin’ilay lalàna mifehy ny fifidianana indray no mipetraka ny adihevitra amin’izao fotoana izao. Mitady ny fomba rehetra hanakorontanana ny Firenena ry zareo rehefa hitany fa toa mirindra sy mizotra tsara ny asam-pampandrosoana eto amin’ny Firenena. Toa lasa mihamatoky fatratra an’i Madagasikara sy ny mpitantana azy ankehitriny ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena. Ingahy Ravalomanana Marc mantsy no mpihirahira matetika fa “tezitra amintsika ny mpamatsy vola noho ny tsy fahaiza-mitantan’ny mpitondra ankehitriny ka mety ho tapaka ny famatsiam-bola”. Ireny niaraha-nahita ireny anefa ny vokatra mivaingana nentin’ny Filoha Andry Rajoelina avy any Washington izay nahazoan’i Madagasikara famatsiam-bola mitentina hatrany amin’ny 400 tapitrisa Dôlara mahery be izao. Tsy zakan’ny mpanohitra izany, tsy zakan’izy ireo satria tsy hiaraha-mitantana amin-dry zareo ilay voandalana. Hatreto dia mbola miady fo mafy mba hisian’io fiaraha-mitantana io izy ireo. “Ravao ny Governemanta satria misy amin’ireo mpikambana ao no tsy manao ny asany araka ny tokony ho izy”.
Tahaka izany, ohatra, ny endrik’ilay fitakiana ankolaka ny fiaraha-mitantana. Raha tsiahiviana anefa teo amin’ny fitondrana ny sasany tamin’izy ireo sy mpitarika azy fa tsy nahavita na inona na inona sy variana nameno ny paosiny mitaha amin’ny mpitondra amin’izao fotoana, nefa dia nanaram-po teo nandritra ny fe-potoam-pitondrana indrona miantoana be izao. “Amin’izao indray dia ilay lalàna mifehy ny fifidianana indray no atao ala olana izay tokony hilàna fifampidinihana”, hoy ry zareo. Fifampidinihana mazava mirona mankany amin’ny fikatsahana seza tsotra izao nefa hatsaratsaraina amin’ny hoe fiaraha-mitantana. Tarazo mbola raiki-tampisaka amin’ireo mpanohitra hatramin’izao ny fitiavan-tseza sy ny fitiavam-bola ho an’ny tombontsoan’ny tenany manokana.